वुहानबाट नेपाली डाक्टर भन्छन्– हाम्रो उद्दारमा जति ढिला हुन्छ, उति हामी पनि संक्रमित हुने जोखिम छ
‘आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन भनेको के हो बुझ्नुस, जथाभावी त्रास नफैलाउनुस्’
२०७६ माघ २६ आइतबार १८:१९:५९ प्रकाशित
नमस्कार, मेरो नाम डा प्रिन्स रौनियार, हाल चीनको हुबेइ प्रान्तमा मास्टर्स पढ्दैछु।
गत डिसेम्बरको मध्यबाट यो प्रान्तमा सुरु भएको कोरोना भाइरसले ठूलो रुप लिइरहेको छ, जसबाट हालसम्म ८ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। मृत्यु हुनेमा हामी बसेको वुहान सहरकै मानिस बढी छन्। बाहिर मर्नेको संख्या एकदमै थोरै छ। वुहानलाई तत्काल लकडाउन (निषेधित क्षेत्र) घोषणा गरेर बाहिर जान रोक लगाएपछि बाहिर धेरै संक्रमण फैलन पाएन।
श्वासप्रश्वास प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने यो भाइरस चमेरोबाट मानिसमा सरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र अमेरिकी सीडीसीले पनि पुष्टि गरिसकेका छन्। यसको संक्रमण मानिस–मानिसबीच एयर ड्रपलेट्स (संक्रमित मानिसले हाँछ्यु गर्दा नजिकको हावामा फैलने थोपाहरु) र स्पर्शबाट फैलन्छ। कुनै स्थानमा यो भाइरस दिसामा पनि भेटिएको खबर छ। तर यो रोग हावाबाट कहिल्यै फैलन सक्दैन किनकि यस्ता किटाणु हावामा बाँच्न सक्दैनन्। यो भाइरसलाई बोक्न जीवजन्तु वा मानिस नै चाहिन्छ।
यो भाइरसको हुर्कने अवधि (इन्क्युबेसन) १४ दिन भनिएको छ। यसको अर्थ यदि एउटा स्वस्थ मानिसलाई संक्रमण भएको खण्डमा लक्षण देखिन संक्रमण भएको १ दिनदेखि १४ दिनसम्म लाग्न सक्छ। कसैले छिटो लक्षण देखाउछन् भने कसैले ढिला। यसको अर्थ कोरोना भाइरस लक्षण नदेखिएका मान्छेले पनि फैलाउन सक्ने देखियो।
लेखक : डा प्रिन्स रौनियार
यदि संक्रमण फैलिएको ठाउँमा बस्दै आएका मानिस आफ्नो देश फर्किनु परे स्वदेशको स्वास्थ्य निकायले उनलाई स्वास्थ्य जाँच गरि संक्रमणको लक्षण छ–छैन भनेर हेर्छ। लक्षण नदेखिए तिनलाई यस्तो व्यवस्थित ठाउँमा राखिन्छ, जहाँ बाहिरी मान्छेसँग निकट सम्पर्क नहोस्। इन्क्युबेसन अवधि सम्मका लागि व्यक्तिलाई कडा निगरानीमा राखिन्छ। उदाहरणका लागि कोरोना भाइरसलाई लिन सकिन्छ। यसको इन्क्युबेसन अवधि १४ दिन हुन्छ। यदि वुहानबाट नेपाल फर्कने मानिसलाई विमानस्थलमा स्वास्थ्य जाँच गर्दा लक्षण नदेखिए पनि १४ दिनका लागि क्वारेन्टाइनमा निगरानीमा राखिन्छ।
यदि यो १४ दिनमा लक्षण देखिएन भने पूर्ण रुपमा ढुक्क भएर समाजमा घुलमिल गर्ने अनुमति दिइन्छ। किनकि ती व्यक्तिमा संक्रमण भएको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। तर यदि १४ दिनभित्रै संक्रमणको लक्षण देखिए तुरुन्त एउटा अस्पतालमा लगिन्छ र आइसोलेटेड वार्डमा राखिन्छ। अस्पतालमा संक्रमितलाई कसैले छुने अनुमति हुँदैन। यसलाई आइसोलेसन भनिन्छ।
नेपालमा अहिलेसम्म आफ्नो जनतालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको अनुभव छैन। त्यसकारण हामीलाई उद्धार गर्न ढिलाइ भएको बुझ्न सकिन्छ। नेपाली समाजमा विरोध हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने नेपालमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बारेमा नै पूर्ण जानकारी छैन। तर नयाँ कुरा सबैले सिक्नुपर्छ र जान्नु पर्छ।
अब हामी वुहानलगायत हुबेइ प्रान्तमा रहेका नेपालीको विषयमा कुरा गरौं। वुहानलगायत छेउछाउका सबै सहर लकडाउन भएको आज १७ दिन भैसकेको छ। यसको अर्थ हामीले इन्क्युबेसन अवधि पार गरिसकेका छौं र हामी सबै नेपाली अहिलेसम्म स्वस्थ छौं। हामीले आफूलाई कोठामा थुनेर राखेका छौं। समाजमा घुलमिल गरेका छैनौं। यदि कोही संक्रमित भएको भए अहिलेसम्म चीन सरकारले आफैं अस्पताल लगिसकेको हुन्थ्यो। तर हाम्रो आफ्नै सतर्कताले गर्दा कोही पनि संक्रमित भएका छैनौं। कोही लुकेर बस्न सक्दैनन्। खानाको अभाव अहिले छैन किनकि हामीले एकैचोटी २–३ साता पुग्ने गरी सामग्री जुटाएर राखेका छौं। पानीको अभाव भने अवश्य छ। शुद्ध पानीसमेत पिउन नपाएको एक साता भइसकेको छ। धारामा आउने बोरिङ्गको पानी उमालेर पिउनु परेको छ। तर खाने सामग्री त बिस्तारै सकिन्छ र किन्न बजार जानैपर्छ। तर, यो बेला बजार जानु भनेको संक्रमणको जोखिम उठाउनु हो।
अहिले हाम्रो उद्धार गर्न जोखिमपूर्ण छैन भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो भन्ने आशा गर्दैछु। तर अब जति ढिलो हुन्छ, त्यति नै हाम्रो संक्रमणको सम्भावना धेरै हुन्छ भनेर सबैले बुझ्नु पर्छ। उद्धारका क्रममा कोही पनि लुकेर भाग्न सक्दैन। किनभने चीनको वायु अड्डामा सबैको पूर्ण स्वस्थ जाँच हुन्छ र कसैमा संक्रमण देखिए तुरुन्त अस्पताल लगिन्छ र स्वदेश फर्किने अनुमति पाउँदैन। चीनबाट नेपाल फर्किएपछि पुनः पूर्ण स्वास्थ्य जाँच गरिन्छ र संक्रमण देखिए आइसोलेसनका लागि अस्पताल लगिन्छ। संक्रमण नदेखिए पनि क्वारेन्टाइनका लागि व्यवस्थित ठाउँमा १४ दिनका लागि राखिन्छ।
यति धेरै जाँचबाट हामी गुज्रिरहँदा कसरी कसैले हामीलाई ‘लिभिङ बायोलोजिकल बम’ को संज्ञा दिन सक्छ?
तर अहिले ‘लिभिङ बायोलोजिकल बम’ भनेका विनारोकटोक र स्वास्थ्य जाँच चीनका अन्य सहरबाट नेपाल भित्रिरहेका मानिस हुन्। त्यसरी भित्रिरहेका नेपाली, चिनिया र अन्य विदेशीमध्ये कोही पनि संक्रमित भएमा नेपालमा पनि फैलन सक्छ भन्ने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण होस्।
यो भाइरसको लक्षण तत्काल नदेखिन पनि सक्छ। यसको इन्क्युबेसन अवधि १४ दिनको हुन्छ। खुल्ला रुपमा नेपाल भित्रिसकेपछि यदि कसैमा लक्षण देखिए के गर्ने? नेपाल सरकार र जनताले वुहानलाई मात्र लक्षित गरि यिनीहरुलाई नेपाल भित्रिन दिनु हुँदैन भन्नु ठीक होइन। कोरोना भाइरस वुहानमा मात्र हैन पुरै चीनमा फैलिइसकेको छ। सरकारले त तुरुन्त चीनबाट नेपाल भित्रिने सबै मान्छेको कडा रुपमा स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने थियो। कतै ढिलो त भएन? यो स्थिति कदापि नआओस्।
वुहानलगायत सबै हुबेइ प्रान्तका नेपाली अहिलेसम्म संक्रमित छैनन्, त्यसैले हामी डराएका छैनौ। तर यदि कसैलाई संक्रमण भैहालेमा हामी कति त्रसित हुन्छौ विचार गर्नुस। शवसमेत घरका मान्छेले हेर्न पाउँदैनन्। यो भाइरस ठीक हुन कम्तिमा पनि २–३ महिना लाग्न सक्छ। अब हामी लामो समय थुनिएर बस्न सक्दैनौ। खानाको अभाव भएपछि बजारमा निस्कन पर्ने हुन्छ । अहिले त जसोतसो बसेकै छौ । तर भविष्यलाई मध्यनजरमा राखेर सोचौं हाम्रो के हुन्छ स्थिति? सबै मुलुकले यो कुरा सोचेरै आफ्ना जनताको उद्धार गरिसके। हामीले कहिले बुझ्ने? गर्मीसँगै यो भाइरसको प्रकोप घट्ने तर्क आइराखेको छ। के अब हामीले गर्मी महिना नै कुर्नुपर्ने हो त?
सरकारले तुरुन्त उद्धार नगरेकोमा दुःख लागेको छैन, न त जनताको विरोधले नै दुःख लागेको हो। अझ बढी दुःख लाग्यो नेपालका ‘विज्ञ’ डाक्टरहरुको तर्कले। उनीहरुले यसबारेमा राम्ररी बुझेर आफ्नो तर्क दिनुपथ्र्यो। कोही भन्छन्– नेपालले उपचार गर्न सक्दै सक्दैन। कोही भन्छन्– चीनमै छाडेको राम्रो। कोही क्वारेन्टाइनमा राखेर केही काम लाग्दैन र कोही भन्छन् उनीहरु ‘लिभिङ बायोलोजिकल बम’ हुन्। यो सब तर्क विभिन्न डाक्टरका हुन्।